ReaR: chishandiso chekuchengetedza uye kupora | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchida kugadzira backup makopi uye kudzorera sevha yakavakirwa paGNU / Linux, saka une nhamba hombe yezvishandiso zvinowanikwa pamunwe wako. Mazhinji acho akanaka, emahara uye akavhurwa sosi, pamwe nekugona kuita otomatiki basa zvakanyanya uye kuita kuti hupenyu huve nyore kune system manejimendi. Imwe yeaya maturusi ndeye ReaR (Relax-uye-Kudzoreredza). Icho hachisi chinhu chitsva, asi ini ndinofunga zvakakodzera kuziva, sezvo ini ndaratidza mamwe akawanda anonakidza maapplication asina kutaurwa nezvawo zvakanyanya mune mamwe midhiya ...
ari backups Icho chiitiko chakajairika mune chero system, zvakanyanya mumaseva anobata rakakodzera ruzivo Uye kunyangwe iwe uine disk redundancy, mune dzakawanda kesi iwe unoda aya marudzi emaapps anogona kukubatsira iwe mune iri basa. NaReaR unogona kushandisa chishandiso chinobatsira-kudzora kudzikama kana zvasvika mukugadzira backup makopi uye system kupora.
Dhawunirodha ReaR kana kuwana rumwe ruzivo nezve ichi chishandiso payayo yepamutemo webhusaiti.
ReaR chishandiso manejimendi manejimendi open source kuteedzera uye kudzoreredza mafaera pakaitika njodzi, zvese kubva kumaseva uye maPC epamba. Mifananidzo yeIOO yebhutsu yeGNU / Linux system kana server inogona kugadzirwa nenzira yakapfava uye yakachengeteka, pamusoro pekudzoreredza panomuka dambudziko.
NaReaR iwe unogona kugadzira bhuti chifananidzo ne mamiriro azvino evhavha yako kana komputa yekumba, nehuzhinji hwezvasarudzo zvemubati izvo zvakare zvinopa kuchinjika pakusarudza mafaera ekuchengetedza.
Su kushandiswa kuri nyore chaizvo neayo zvinyorwa-zvakavakirwa interface, uye kuiswa kwayo kunogona kuitwawo nyore kubva kunobva kodhi kana zororo re distro yako kana ichiwanikwa (kunyanya kune RPM-based).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » ReaR: chishandiso chekuchengetedza uye kupora